Kooxaha Chelsea & Man City oo wada doonaya Leonardo Bonucci – Gool FM
Kooxaha Chelsea & Man City oo wada doonaya Leonardo Bonucci
Raage October 7, 2016
Juventus defender Leonardo Bonucci reacts during a Serie A soccer match between Inter Milan and Juventus, at the San Siro stadium in Milan, Italy, Saturday, March 30, 2013. (AP Photo/Luca Bruno)
(London) 07 Okt 2016 – Wararka ka imanaya England ayaa sheegaya in daafaca Leonardo Bonucci ay cayrsanayaan Manchester City, halka ay sidoo kale horay safka ugu jirtey kooxda Chelsea oo laacibka Juve kala xiriiri doonto Juventus suuq-xagaaga.
Sida uu dhigayo warsidaha The Mirror, Pep Guardiola ayaa xagaaga isku deyi doona inuu daafacan reer Talyaani kooxdiisa ku xoojiyo, iyagoo sidoo kale doonaya weerarka Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang iyo Hector Bellerín oo ka tirsan Arsenal.
Yeelkeede, calciomercato.com ayaa ku adkaysanaya in macallinkii hore ee Juve ee Antonio Conte uu sidoo kale aad u doonayo inuu dib ula midoobo Bonucci, isagoo 29-jirkan u arka muhiimadda 1-aad, isagoo u diyaar ah inuu ka dhigo daafaca ugu qaalisan caalamka.
Juve ayaase dhanka kale la sheegayaa inay ka caga taallaynayso inay wada xaajood la furto kooxna, iyagoo doonaya inay qandaraas qaali ah ugu yaboohaan todobaadyada soo aaddan.
FIFA oo magdhow ka bixinaysa dhaawaca Riccardo Montolivo! (Sidee?)
Maxkamadda Sare ee Dembiyada Spain oo amartay in dib loo furo kiiskii Neymar